Impendulo eKhawulezayo: Qalo Rings Apho Uthengwa khona-BikeHike
Impendulo eKhawulezayo: Qalo Rings Apho Uthengwa khona
ezaposwa ngomhla Agasti 22, 2021 By danna
Ngaba iWalmart ithengisa amakhonkco e-QALO?
Ibekwe phi iQALO?
Ngaba uEnso okanye uQALO ungcono?
Zenziwa ngantoni iiringi zeQALO?
Ngaba ubukhulu beringi yakho bulingana nobukhulu besihlangu sakho?
Kutheni abantu abaninzi benxibe iibhanti zomtshato ezimnyama?
Ngaba i-asexuals inxiba imisesane emnyama?
Ngaba unokunxiba umsesane we-silicone njengendandatho yothethathethwano?
Uthetha ukuthini uQALO?
Ngaba amakhonkco e-Enso enziwe e-USA?
I-silicone emnyama ithetha ntoni?
Kutheni amapolisa enxiba imisesane emnyama?
Kuthetha ukuthini xa ibhinqa lifaka umsesane kubhontsi wasekunene?
Yintoni umsesane weQALO?
Ithetha ntoni umsesane womtshato werabha?
Ngubani owasungula umsesane we-silicone?
Bungakanani ubungakanani bendandatho yomfazi?
Ngaba i-GNC iyawathengisa amakhonkco e-QALO?
Ngaba amakhonkco e-QALO azolula ngokuhamba kwexesha?
Kutheni abantu benxiba imisesane ye-silicone?
Ngaba amakhonkco e-QALO anyanisekile ngokobungakanani?
Kuthetha ukuthini xa indoda inxibe ibhanti yomtshato omnyama?
Yintoni inqaku le-QALO rings?
I-QALO - umgangatho wamadoda amnyama we-qalo q2x ubungakanani be-silicone ye-10 yeringi ye-XNUMX-Walmart.com-Walmart.com.
I-US QALO yinkampani yaseMelika yobucwebe ekwikomkhulu laseSanta Ana, eCalifornia. Ngokuyintloko ivelisa amakhonkco omtshato kunye nokuzibophelela okwenziwe kwi-silicone kunentsimbi yendabuko.
Ngokubanzi, ngelixa inkonzo yabathengi kunye nomgangatho weringi kuzo zombini zinconywa ngokubanzi, uQalo waziwa ngamakhonkco atyebileyo ngelixa i-Enso inikezela ngezaci ezincinci. Abanye bakhetha inkangeleko yamva kunye neenketho zabo ezijongeka njengentsimbi, ngelixa abanye befumanisa iiringi zikaQalo ziziva zomelele ngakumbi.
Yenziwe Ngantoni Umsesane weQALO? I-QALO yenziwe nge-silicone ekumgangatho ophezulu. Oku kuthetha ukuba iringi ayinakufane ibangele ukucaphuka okanye ukuchasana nolusu lwakho kunentsimbi yesintu. Bazolula ngomnwe wakho, okuthetha ukuba umsesane wakho awusokuze “ubambeke” kwakhona.
Xa ekuxelela ubungakanani besihlangu, sebenzisa le fomula yenziweyo: ubungakanani besihlangu esahlulwe ngo-2 kunye no-1.5 kukunika isayizi yeringi yakho.
Umnyama unokubonisa amandla, inkalipho, okanye amandla, kunye nokubonisa ukuqiniseka okanye ukukholelwa. Ngokumalunga nomtshato, umsesane omnyama unokufanekisela amandla othando. Ukunxiba amakhonkco amnyama kunokuba yindlela yokuba isibini sibonise ukuba bazinikele emtshatweni wabo kwaye bakholelwa kumandla omanyano lwabo ngaphezu kwayo yonke into.
IsiNgesi: Iringi emnyama luphawu lobufanasini kwaye idla ngokunxitywa kumnwe ophakathi wasekunene.
Uvakalelo emva kweringi yothethathethwano lulungile. Yinto onokuyinxiba ngamaxesha onke, iiyure ezingama-24 ngosuku, ukubonisa ukuzibophelela kwakho nothando kwiqabane lakho. Kodwa xa usenza, amakhonkco othethathethwano emveli awenzi itoni yengqiqo. Kodwa, ungasoloko ushukumisa iringi ye-silicone endaweni yoko! Julayi 13, 2020
Iiprototypes ezimbalwa kamva, zafika kwi-100% ye-silicone yenqanaba lezonyango kwaye i-QALO yazalwa-ngokoqobo-kwigaraji yeHolide. I-QALO, ebizwa ngokuthi [KAY-LO], imele "uMgangatho, i-Athletics, Love, Outdoors" kwaye ekuqaleni, abaphulaphuli ekujoliswe kubo yinkampani yayiyi-action-sports, i-Workout kunye neseti ye-Crossfit.
I-PREMIUM ENSO SILICONE RING: I-Enso ngumenzi wokuqala we-Premium Silicone Wedding Rings. Thenga ngokuzithemba ukwazi ukuba yonke i-Enso ring yenziwe e-USA, kwaye iringi nganye ibandakanya iwaranti yobomi.
Umbala Omnyama Kwabanye ufuzisela into ebuhlungu okanye embi, njengokulila ukufa komntu omthandayo. Kwabanye luphawu lwamandla, amandla kunye nokukhuselwa, kwaye abanye bayibona njengokubonakaliswa okungunaphakade kothando nokuzibophelela.
NgokuNxitywa umsesane omnyama womtshato, nokuba ngumsesane owenziwe nge-silicone, i-carbon fiber, okanye enye into, yindlela yamapolisa yokunciphisa ingqalelo engafunwayo. Ithumela umqondiso kumasela anokubakho ukuba akukho nto yexabiso apho eqinisekisa uhlaselo olungalindelekanga.
Abanye bakholelwa ukuba amakhonkco anxitywa kubhontsi afuzisela ubutyebi, iwonga, okanye amandla. Abanye bakholelwa ukuba bafanekisela ubuhlobo beplatonic. Ukunxiba umsesane kubhontsi wesandla sasekunene kungabonakalisa ukuziqinisekisa kunye/okanye ukuthandabuza ngamabhongo. Iringi kubhontsi nazo zenza ingxelo yefashoni emnandi ukuba uluhlobo lokwenza enye!Oct 3, 2020
Amakhonkco e-QALO ngamakhonkco e-silicone ekumgangatho ophezulu eyilelwe ukwenza isandla sakho sonwabe. Ukumelana ne-oyile kunye ne-solvents, i-QALO yenzelwe ukuba ihlukane xa ifakwe phantsi koxinzelelo olunzulu ukuze umnwe wakho uhlale ukhuselekile.
Yintoni amakhonkco omtshato erabha? Ziyi-silicone iindandatho zomtshato kumadoda nabasetyhini kwaye zinxitywe ukufuzisela umanyano lwabantu ababini abathandanayo.
Umbono weza xa uCameron Bair, umyili womsesane wokuqala we-silicone womtshato, wakhathazeka emva kokuba efuna ngokuqhubekayo ukuba atshintshe ibhendi yakhe yomtshato yegolide ebiza kakhulu ngenxa yokuphila kwakhe okusebenzayo. Wayefuna ukwenza umsesane ofikelelekayo ukuwutshintsha, ukhululekile, kodwa okona kubaluleke kakhulu-wamgcina ekhuselekile.
Umyinge wesayizi yeringi yabasetyhini sisi-6 kunye ne-avareji yesayizi yeringi yamadoda si-8½ Ukuqikelela isayizi yeringi yeqabane lakho ngokuchanekileyo kunokwenziwa ngengqiqo encinci eqhelekileyo. Ukuba uneqabane elincinane, kusenokwenzeka ukuba izandla zabo zincinci ngeminwe ebhityileyo, ngoko zama ukuqala kubukhulu 4 okanye 4½ kubasetyhini, kwaye malunga nesi-7 samadoda.
I-Qalo Men's Classic Ring-Mnyama / Ubungakanani be-11: I-Silicone Ring Ekhethekileyo kwi-Qalo, le msesane ikhethekileyo ye-silicone iyasebenza nakwimisebenzi emdaka kwezona ndawo zinzima. QALO, Inc.
Izangqa ze-QALO zinokolula kwendalo kuzo ukuze zikwazi ukutyibilika ngokukhululekileyo phezu kwamaqupha nakumnwe wakho. Ngoko ke ekuhambeni kwexesha, kusenokwenzeka ukuba bayakwazi ukolula, kodwa asizange sive naziphi na iiringi zeQALO ezicuthekayo.
Abancedi kuphela ekuthinteleni ubusela, kodwa bakwanceda ukugcina amakhonkco akho kwimeko engcono. Xa unxibe iringi yesilicone, awunxibanga iringi yakho “yokwenyani” rhoqo, oko kuthetha ukuba unqanda ukukrwela nokukrazuka ngokubanzi. Zikwalingana kakuhle kwaye ziza ngemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu.
Izangqa zethu ze-Classic QALO ziqhuba malunga nesiqingatha sobungakanani. Ngelixa nawaphi na amakhonkco enziwe nge-Q2X okanye amakhonkco e-Athletics Perforated aqhuba ngokwenyani ngakumbi kubungakanani. Umzekelo: Iringi yemveli isayizi 9 iodola isayizi 9 kwiQALO. Xa unxibe amakhonkco amaninzi ngexesha, sincoma ukulinganisa ukuya kubukhulu obulandelayo.
Iibhendi zomtshato eziMnyama njengeNgxelo yoMvakalelo Kwabanye, umsesane womtshato omnyama unokufuzisela isibindi namandla. Ayimelanga nje amandla omzimba, kodwa amandla okuzikholelwa, nawo. Ngoko ke, “ithetha” into ethile ngomntu oyinxibileyo.
Yenzelwe intuthuzelo kunye nokhuseleko, amakhonkco e-QALO enzelwe izandla ezisebenzayo. Cinga ngedayimane yakho njengezithende zakho ezizii-stiletto ezibiza kakhulu kunye ne-QALO njengeeteki ozithandayo.
Impendulo eKhawulezayo: Uza kuyithenga phi iQalo Rings
Umbuzo:Ndingayithenga phi iQalo Rings
Ungathenga phi iQalo Rings
Impendulo eKhawulezayo: Uza kuyithenga phi iQalo Ring
Umbuzo: Zithengiswa Phi IQalo Rings
Zeziphi iiVenkile ezithengisa iQalo Rings
Umbuzo: Uzithenga phi iiQalo Rings evenkileni
Impendulo eKhawulezayo: Iringi yempumlo yokuBling yempumlo
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iiNkqubo zeRingi yeBicyclic zineRingi ezingaphezulu kwe-2
Impendulo eKhawulezayo: Uza kuzithenga phi iiringi ze-Enso
Impendulo eKhawulezayo: Iringi zikaMama
Post Previous: Indlela yokuba yi-Powerlifter
Okulandelayo Post: Ndingazithenga phi izihlangu zeMerrill